Period During Thingyan - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သင်ျကွနျရကျတှမှော ဘာမှထှထှေထေူးထူးအစီအစဉျမရှိ၊အိမျမှာပဲ အပွညျ့အဝအနားယူမယျ့သူတှအေတှကျ ရာသီဓမ်မတာပျေါခြိနျနဲ့ တိုကျဆိုငျနရေငျ ပွသနာမရှိပမေယျ့လို့ သင်ျကွနျရကေစားမယျ့ ပြိုပြိုတှေ အတှကျကတော့ အနညျးနဲ့အမြား ကရိကထမြားပါတယျ။
သင်ျကွနျမဏ်ဍပျတှမှောရကေစားတဲ့အခါ၊ကားနဲ့ရလေညျခံထှကျတဲ့အခါ၊လမျးလြှောကျသင်ျကွနျပါဝငျဆငျနှဲကွတဲ့ အခါမြိုးမှာ ဓမ်မတာ သှေးဆငျးခြိနျနဲ့ကှကျတိဖွဈနခေဲ့ရငျ ?
လစဉျသုံးနကြေ pad (အမြိုးသမီးလစဉျသုံးပစ်စညျး)အစား tampon(တနျပှနျ) လို့ချေါတဲ့ ရာသီသှေးစုပျယူပေးတဲ့ ဂှမျးတောငျ့လေးတှကေိုအသုံးပွုခွငျးကို ပိုအဆငျပွနေိုငျပါတယျ။
သတိထားရမယျ့အခကျြကတော့ ၄နာရီခွားတဈခါလဲပေးဖို့နဲ့ မလဲလှယျဘဲ အခြိနျကွာမွငျ့စှာသုံးမယျဆိုရငျ ပိုးဝငျနိုငျတာမို့ အပြျောလှနျ/အမူးလှနျပွီး tampon လဲရနျ မမေ့နဖေို့ ကွိုတငျသတိပေးပါရစေ။
ရာသီသှေးကိုခံထား/ထိနျးထားပေးသော menstrual cup (ချေါ) ခှကျလေးတှကေိုလညျးသုံးနိုငျပါတယျ။ ၁၂ နာရီခွားမှတဈခါလဲနိုငျတာကွောငျ့ tampon ထကျစာရငျ အလုပျရှုပျပိုသကျသာ စပေါတယျ။
တားဆေးအသုံးပွုပွီး ရာသီရကျရှခေ့ငျြတယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့စနဈတကြ တိုငျပငျပွီးမှ ညှနျကွားခကျြအတိုငျး ဆောငျရှကျသငျ့ပါတယျ။
နောကျထပျသတိပေးခငျြတာကတော့ ရာသီလာစဉျ ဆီးစပျကိုကျခွငျး၊ခါးနာခွငျးမြားကို ပိုဆိုးစနေိုငျသော အခကျြတှဖွေဈတဲ့
ဂြာကငျ၊ပဝါ၊အဝတျအစားအပိုအလုံအလောကျယူသှားပွီး တနကေုနျစိုစှတျခမျြးအေးခွငျးကို ကာကှယျပါ။
သင်္ကြန်ရက်တွေမှာ ဘာမှထွေထွေထူးထူးအစီအစဉ်မရှိ၊အိမ်မှာပဲ အပြည့်အဝအနားယူမယ့်သူတွေအတွက် ရာသီဓမ္မတာပေါ်ချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေရင် ပြသနာမရှိပေမယ့်လို့ သင်္ကြန်ရေကစားမယ့် ပျိုပျိုတွေ အတွက်ကတော့ အနည်းနဲ့အများ ကရိကထများပါတယ်။
သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွေမှာရေကစားတဲ့အခါ၊ကားနဲ့ရေလည်ခံထွက်တဲ့အခါ၊လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဓမ္မတာ သွေးဆင်းချိန်နဲ့ကွက်တိဖြစ်နေခဲ့ရင် ?
လစဉ်သုံးနေကျ pad (အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်း)အစား tampon(တန်ပွန်) လို့ခေါ်တဲ့ ရာသီသွေးစုပ်ယူပေးတဲ့ ဂွမ်းတောင့်လေးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းကို ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
သတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ ၄နာရီခြားတစ်ခါလဲပေးဖို့နဲ့ မလဲလှယ်ဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးမယ်ဆိုရင် ပိုးဝင်နိုင်တာမို့ အပျော်လွန်/အမူးလွန်ပြီး tampon လဲရန် မေ့မနေဖို့ ကြိုတင်သတိပေးပါရစေ။
ရာသီသွေးကိုခံထား/ထိန်းထားပေးသော menstrual cup (ခေါ်) ခွက်လေးတွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ ၁၂ နာရီခြားမှတစ်ခါလဲနိုင်တာကြောင့် tampon ထက်စာရင် အလုပ်ရှုပ်ပိုသက်သာ စေပါတယ်။
တားဆေးအသုံးပြုပြီး ရာသီရက်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့စနစ်တကျ တိုင်ပင်ပြီးမှ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ်သတိပေးချင်တာကတော့ ရာသီလာစဉ် ဆီးစပ်ကိုက်ခြင်း၊ခါးနာခြင်းများကို ပိုဆိုးစေနိုင်သော အချက်တွေဖြစ်တဲ့
ဂျာကင်၊ပဝါ၊အဝတ်အစားအပိုအလုံအလောက်ယူသွားပြီး တနေကုန်စိုစွတ်ချမ်းအေးခြင်းကို ကာကွယ်ပါ။
နို့တိုက်​မိခင်​နှင့်​ သင်္ကြန်​တွင်း ဥပုသ်​​စောင့်​သင့်​ မ​စောင့်​သင့်​ ?